Isitudiyo esipholileyo sale mihla esikufuphi esixekweni - I-Airbnb
Isitudiyo esipholileyo sale mihla esikufuphi esixekweni
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguElaine
I-Fernside Rangiora yale mihla inesitudiyo esiphangaleleyo esinendawo yokuhlambela yeendwendwe ezi-2 kunye nendlu yangasese emi kude nendlu enkulu. Indawo entle ezolileyo yasemaphandleni kwindawo yokuphila ibhlokhi ye-30 mins emantla eChristchurch International Airport
Ilokishi yaseRangiora ikumgama oziikhilomitha ezi-5 kunye nokufikelela ngokulula ekuthengeni, kwiindawo zokutyela nakwiimuvi.
I & 1/2 hrs ukuya eHamner Springs, 1 hr ukuya Porters kudlule ibala ski. Kufuphi namanxweme eWaikuku, eWoodend, ePegasus Bay, kunye nomlambo iWaimakariri wokuqubha ngesikhephe kunye nokuloba
Isitudiyo simenyezwe kabini. Inompompo wokushisa we-Inverter / i-air conditioner, inkqubo ye-HRV (inkqubo yokuphefumula kwakhona) I-Smart TV ene-Netflix, i-Wifi yamahhala, iKitchenette enetafile kunye nezitulo, ifriji, i-microwave, i-toaster, i-kettle, i-cutlery kunye nezitya. Isidlo sakusasa sasimahla selizwekazi, ayinagluten xa uyicela, iitawuli ezintsha zitshintshwa mihla le, ingubo yombane kobo busuku bubandayo basebusika. Igumbi lineengcango zaseFransi ezivuleleka kwipatio enetafile kunye nezitulo phakathi kwegadi enezinto zokuhombisa.
4.98 · Izimvo eziyi-210
I-Fernside yimizuzu emi-5 ukusuka kwilokishi yaseRangiora ngemoto enekhefi zalapha ekhaya, imiboniso bhanyabhanya, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, iqula lokuqubha langaphakathi, ibala legalufa kunye neeklabhu zokubhola. Ikufuphi neChristchurch kunye nomgama olula wokuqhuba uhambo lwemini ukuya eHamner, Kaikoura, Terrace Downs Golf Club, Timaru Oamaru naseMethven.
Siyavuya kakhulu ukuba nonxibelelwano neendwendwe xa kufuneka. Nangona kunjalo, uya kuhlonipha nokuba yimfihlo kwakho. Ukuba ujonge amava okuhlala efama unokunceda ukondla iinkomo okanye ukujonga iinyosi ukuba uyafuna. Ukungcamla ubusi simahla kunikezelwa. Ungazinceda nakwicranberries, ekhoyo ngoFebruwari nangoMatshi. Ziyakhula ngaphandle nje komnyango wakho wangaphambili.
Siyavuya kakhulu ukuba nonxibelelwano neendwendwe xa kufuneka. Nangona kunjalo, uya kuhlonipha nokuba yimfihlo kwakho. Ukuba ujonge amava okuhlala efama unokunceda ukondla iinkomo…